कर्मचारीहरु निर्वाचन सामग्रीसहित कार्यक्षेत्रमा | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: १ मंसिर, २०७०
कर्मचारीहरु निर्वाचन सामग्रीसहित कार्यक्षेत्रमा
भरतपुर । मंसिर ४ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनको लागि खटिएका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ खटिएका छन् । निर्वाचन कार्यालय चितवनबाट निर्वाचन सामग्री लिएर उनीहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुगेका हुन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि चितवनमा करिव दुई हजार ८०० कर्मचारीहरु खटिँदै छन् । उनीहरु निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिन नियुक्ति लिएर हिँडेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार शुक्रबारसम्म चितवनका ३६ वटा गाविसका मतदान केन्द्रहरुमा मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतसहित बढीमा ६ जना कर्मचारीहरु मतदान समग्री लिएर त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
जिल्लामा रहेका ३७८ मतदान केन्द्रमध्ये २६७ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन समग्रीसहित मतदानका लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु खटिइसकेका छन् । उनीहरुको सुरक्षा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाली सेनाले पनि दिनेछ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सामग्री लिएर सदरमुकाम भरतपुरदेखि निस्किएका कर्मचारीहरु शुक्रबार साँझसम्म निर्वाचन केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालका अनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिकामा आज शनिबार र आइतबार निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारीहरु खटिने छन् ।
जसमध्ये भरतपुर नगरपालिकाका ७८ र रत्ननगर नगरापालिका ३३ मतदान केन्द्रहरुमा निर्वाचन सामग्री तथा कर्मचारीहरु शनिबार तथा आइतबार खटिने भएका हुन ।
जिल्लामा १४१ मतदान केन्द्रमा ३७८ उपकेन्द्रहरु केन्द्र कायम गरिएको छ । जसमध्ये क्षेत्र नं. १ मा २४ मतदान केन्द्र र ७४ मतदान उपकेन्द्र्रहरु रहेका छन् जहाँबाट ५३ हजार ९७२ जनाले मतदान गर्नेछन् । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ का ३३ मतदान केन्द्र तथा ८३ मतदान उपकेन्द्रबाट ६० हजार ५८, क्षेत्र नं. ३ का २४ मतदान केन्द्र तथा ७४ मतदान उपकेन्द्रबाट ५४ हजार ७६५ जना मतदाताले मत खसाल्ने भएका छन् ।
३१ मतदान केन्द्र तथा ८१ वटा मतदान उपकेन्द्र रहेको क्षेत्र नं. ४ मा ५९ हजार ६९३ जना मतदाता रहेका छन् भने २९ मतदान केन्द्र रहेको क्षेत्र नं. ५ मा ६६ मतदान उपकेन्द्र रहेका छन् जहाँबाट ४५ हजार ३१५ जनाले मतदान गर्न पाउने छन् ।
निर्वाचन कार्यालयले शुक्रबारदेखि नै हरेक मतदान केन्द्रहरुमा मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको छ । चितवनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा दुईलाख ७३ हजार ८०३ मतदाता रहेका छन् ।
यसैबीच जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन अवधिभर सञ्चालनका लागि सवारीसाधनहरुको पास शुक्रबार नै वितरण गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक संस्थाहरुलाई सवारी अनुमति प्रदान गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।